Ciidamada Uganda ka jooga Soomaaliya oo cayil la tegay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kampala – Mareeg.com: Weriye u dhashay dalka Uganda, kana tirsan Wargesyka The New Vision ee kazoo baxa dalkaas, islamarkaana booqasho ku yimid Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ee ka midka ah howlgalka AMISOM uu halis weyn ku hayo cayil xad-dhaaf ah.
Weriyahan oo labo maalmood jooga Soomaaliya ayaa yiri “7 sano ayaa kazoo wareegtay markii Uganda u dirtay Soomaaliya ilaa 7000 oo askari oo ka mid ah AMISOM, qaar badan oo ka mid ah noloshooduna ma ahaan doonto sidii hore”.
Weriyahan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dalkiisa ee jooga Soomaaliya ay qabaan dhibaato ka daran iney naftooda ku waayaan weerarada argagixiso sida uu yiri, balse ay dhib weyn ku qabaan cayilka, islamrkaana ay dalkooda dib ugu laaban doonaan iyagoo aad u cayilan.
Sida weriyuhu ku qoray warbixinta The New Vision, ciidamada ka socda dalka Uganda ayaa waxa ay maalin walba cunaan cunto ka tayo wanaagsan marka loo fiiriyo tan ay dalkood ka cunaan.
Wuxuu sheegay in ciidamada Uganda ay Soomaaliya ku cunaan Bariis, helib, kaluun, digaag, rooti, digir iyo qudaar kala duwan, ukun, caano, cabitaan miiran iyo malab. Sidoo kale helaan liin macaan iyo liin dhanaan iyo weliba tufaax, shaah, kafee iyo shukulaato.
Afhayeenka ciidamada Lt. Col. Paddy Ankunda ayaa sheegay in ciidamadiisa ay u baahan yihiin in ay iska ilaaliyaan cayilka.
Qolka ay ku cunteeyaan ciidamada ayaa waxaa ku xiran shaashad Taleefishin oo weyn taasoo ay ka daawadaan kanaalada wararka inta ay cuntaynayaan sidoo kale waxaa yaal qaboojiye ay ka buuxaan qudaar miiran iyo cabitaan.
Sidoo kale, weriyahan ayaa sheegay in ciidamada Ugnada Muqdisho ka degan yihiin deegaan wanaagsan, oo habeenkii si wanaagsan loogu hurdi karo.
Horay ayaa ciidamo ka socday Uganda oo laga badelay Soomaaliya waxey dacwad u gudbiyeen madaxweynaha dalkooda Mussevine, iyagoo u sheegay iney marar badan Alshabaab la dagaallameen iyagoo baahan.
African youth championship: Djibouti and Burundi